Windows 10 Meyi 2020: zonke izindaba ezizofika nesibuyekezo esilandelayo | Izindaba zamagajethi
Windows 10 Meyi 2020: zonke izindaba ezizofika nesibuyekezo esilandelayo
U-Ignacio Sala | | Amakhompyutha, Windows
Lapho iMicrosoft ikhipha ngokusemthethweni iWindows 10 ngoJulayi 2015, inkampani yakwaStaya Nadella yathi lokhu kungaba yinguqulo yakamuva ye-Windows, bekungeke kusaba khona ezinye izinhlobo ezinezinombolo ezintsha. Kusukela manje, sekudlule cishe iminyaka engu-5 futhi lokhu kucabanga kogebenga bekhompyutha kuhlala kungashintshi.
Isu elilandelwa yiMicrosoft lisuselwa kulo khipha izibuyekezo ezimbili ezinkulu zonyaka, isabalale ngekota yesibili neyesine yonyaka. Lokhu kubuyekezwa okusha kuhlanganisa imisebenzi emisha ukuthuthukisa ukusebenza kwayo kepha kepha akuphuli njengakuqala.
Kokubili iWindows ne-macOS kukhona kukhawulelwe namuhla kubuchwepheshe obutholakalayo. Uma nje lokhu kungathuthuki, ngeke bakwazi ukufaka ukusebenza okusha, yize bezothuthukisa lokho okwamanje okusinikezayo, into ethokozelwa nakanjani.
Isibuyekezo seWindows 2020 May 10, esiseduze nokufika emakethe, sisinikeza inani elikhulu lezici ezintsha, eziningi zazo zangaphakathi futhi ezihlobene nokuphathwa kwenqubo. Kepha futhi isinikeza izindaba kwezinye izingxenye ezinjengezaziso, isigaba iMicrosoft esisebenze kakhulu kune-Apple, yize ikhona kuma-macOS isikhathi eside kunaku-Windows 10.
Isici esisodwa esize nokubuyekezwa okukhulu kwangaphambilini kweWindows kwakuwumsebenzi weTimeLine, umsebenzi lowo bambalwa kakhulu abantu abagcina bekuthola kuwusizo, ngenxa yendawo okuyo, ngoba itholakala kuphela lapho sifuna ukudala noma ukushintsha phakathi kwama-desktops.
Ku-Windows 10 siyaqhubeka nokuthola imikhondo eminingi ye-Windows 7, njenge Iphaneli yokulawula, iphaneli elisivumela ukuthi senze ukulungisa ohlelweni esingenalo ngokusebenzisa iphaneli entsha yokumisa iWindows. Amanye amahlebezi aphakamisa ukuthi iWindows ifuna ukuyenza inyamalale, ngenhlanhla, ukuthi lawo mahemuhemu awakagcwaliseki nge-Windows 10 Meyi 2020. Okwamanje, izoqhubeka nokuhlala ndawonye futhi ngendlela engaqondakali.
1 Khipha izinhlelo zokusebenza zomdabu
3 Ibhokisi lokusesha
4 Ideski ebonakalayo
5 Imininingwane engaphezulu mayelana nokushayela ku-Task Manager
6 Qala kabusha izinhlelo zokusebenza
7 Isimo senethiwekhi
8 Okunye okuhle kakhulu Windows 10 Meyi 2020
9 Ngabe Windows 10 ikhishwe ngoMeyi 2020
Khipha izinhlelo zokusebenza zomdabu
Akukaze kune imvula ngokuthanda kwawo wonke umuntu. Baningi abasebenzisi, kokubili amadivayisi weselula nawedeskithophu lokho abafuni ukubona izicelo zomdabu ngisho nakupende ezingakaze zisetshenziswe futhi ezikhona, zihlala zibonakala, zicasula amehlo, zithatha isikhala (yize sincane) ...
I-Windows 10 May Update, izosivumela khipha noma yiziphi izinhlelo zokusebenza zomdabu njenge-WordPad, i-Paint, izinhlelo zokusebenza ezingahlanganisiwe ohlelweni, kepha eziyingxenye yazo ukuze zikwazi ukubhala noma ukuhlela izithombe zethu ngaphandle kokusebenzisa isoftware yomuntu wesithathu.
Windows 10 ingaziqhenya ngokunikela ngohlelo lwesaziso ezinye izinhlelo ezisebenza ezingathanda kakhulu kuzo zombili ideskithophu neselula. Noma kunjalo, kusuka kwaMicrosoft bebefuna ukungeza izinketho eziningi zokumisa nokwenza ngezifiso esivele isinikeze yona kuze kube manje, into ngokungangabazeki eyaziswa futhi ezokwamukelwa kahle ngabasebenzisi.
Njengoba iWindows 10 iguqukile, kanjalo nebhokisi lokusesha, ibhokisi lokusesha manje eliwusizo kakhulu futhi elinokusebenziseka okuningi kunezinguqulo zokuqala zeWindows 10. NgoMeyi 2020, iMicrosoft ithuthukise i-algorithm ethola izinga lomsebenzi wokukhonjwa kwefayela ukuze umuzwa wokusesha usheshe futhi uthathe isikhathi esincane.
Lapho sisebenza nezinhlelo ezingaphezu kwesisodwa ngasikhathi sinye, uma umqaphi wethu akwanele ukuvula izinhlelo ezimbili ndawonye, ​​kuyanconywa sebenzisa amadeskithophu abonakalayo, isici esisha esivela esandleni Windows 10 futhi lokho kugxile ekukhiqizeni.
Kodwa-ke, yazalwa ilunyonga, ngoba yayingenayo imisebenzi ethile esivumela ukuba sihlele umsebenzi ngendlela enethezekile. NgoMeyi 2020, enye yalezi zinkinga isixazululiwe, ngoba iyasivumela engeza igama kuma-desktops, igama eligcinwa lapho sicisha okokusebenza kwethu, okusivumela ukuthi sakhe amadeski / izikhungo zokusebenza ezahlukahlukene.
Ideskithophu ngayinye ingabonisa izinhlelo zokusebenza esizifunayo ngaphandle kokugqagqana kudeskithophu eyodwa. Ngeshwa, okungasivumeli okwamanje shintsha ukuhleleka kwama-desktops, okungukuthi, hambisa ideskithophu ukuze ibe eyokuqala esikhundleni sokugcina (noma okuphambene nalokho) noma uguqule ukuhleleka kwazo.
Imininingwane engaphezulu mayelana nokushayela ku-Task Manager
Umphathi Wemisebenzi obusisiwe, lowo msebenzi wohlelo (asikwazi ukulubheka njengohlelo uqobo) olusivumela ukuthi sihlole ngokushesha ukuthi kwenzekani eqenjini lethu. Ngokuvuselelwa okusha, iWindows izosinikeza imininingwane ehlukile yeyunithi ngayinye esinayo eqenjini lethu. Kepha ngaphezu kwalokho, kuzophinde kusivumele ukuthi sazi i- ukushisa kwekhadi lethu lemidwebo ngaphandle kokusebenzisa isoftware yomkhiqizi.
Qala kabusha izinhlelo zokusebenza
Kuya ngokusetshenziswa kwethu kwemishini yethu, ukusebenza noma ukungcebeleka, kungenzeka lokho ake sihlale sivula izinhlelo ezifanayo. Ngemuva kokufaka lesi sibuyekezo esisha, Windows 10 ingeza umsebenzi wokuqalisa kabusha wezinhlelo zokusebenza, umsebenzi ozinakekela ngokuzenzakalela ukuvula zonke izinhlelo zokusebenza ebesizivule ngaphambi kokungena ngemvume, ukuqala kabusha ikhompyutha yethu noma ukuyivala.
Ukusebenza Iyafana naleyo enikezwa iziphequluli. Lapho sisetha ikhasi lasekhaya kusiphequluli, ukulivula okokuqala kuzohlala kulayisha lelo khasi. Kulokhu, zizoba izicelo ezifanayo ebesizisebenzisa.
Lesi sici senzelwe impela ukwandisa umkhiqizo wethu, yize isikhathi sokuqala kweqembu lethu sandiswa. Vele, uma nje sihlala phambi kwethimba lethu, zonke izicelo ebesifuna ukuzisebenzisa sezivulekile futhi zasatshalaliswa kuma-desktops ahlukene (uma siwasebenzisa).
Ngaphakathi kwe-submenu yenethiwekhi ne-inthanethi, lesi sibuyekezo esisha isinikeza imininingwane eminingi ngenethiwekhi yethu, esivumela ukuthi sikwazi ukufinyelela kalula kuzakhiwo zokuxhuma kwethu, sihlole futhi sinciphise ukusetshenziswa kwedatha kusuka kuzinhlelo zokusebenza esizifakile kukhompyutha yethu futhi ezixhuma kwi-inthanethi ...
Okunye okuhle kakhulu Windows 10 Meyi 2020
Izithonjana ezintsha zamafolda ku-Windows Explorer.
Izici ezintsha ku-DirectX 12
Shintsha isivinini sesikhombisi
I-calculator ingaphinwa ukuze ibe ngaphezulu kwazo zonke izinhlelo zokusebenza
Imodi ephephile isivumela ukuthi sisebenzise i-PIN ku-Windows Hello
Imisebenzi emisha kusigaba sokungeneka
Izinketho eziningi ziyatholakala esikhungweni sokuphawula
Incwajana iyabuya kepha isesandleni sesitolo sohlelo lokusebenza.
Ngabe Windows 10 ikhishwe ngoMeyi 2020
Ukungavuseleli kabusha izinhlobo ezintsha zeWindows kusho ukuthi wonke Windows 10 amakhompyutha abuyekezwe njalo enguqulweni yakamuva etholakalayo namuhla, izobuyekezwa ngokuzenzakalela futhi mahhala enguqulweni entsha ye-Windows 10.
Njengoba igama layo likhombisa, ukwethulwa kwayo kungu- ihlelelwe uMeyi 2020, okungukuthi, ezinsukwini ezimbalwa. Njengamanje le nguqulo itholakala ohlelweni lweMicrosoft Insider njengenguqulo yakamuva etholakalayo, ngakho-ke kuzoba yiyona ndlela yokugcina ezofinyelela kuwo womabili amakhompyutha athengiswayo nenguqulo esizokwazi ukuyilanda ngqo kwiwebhusayithi ye-Microsoft.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Windows » Windows 10 Meyi 2020: zonke izindaba ezizofika nesibuyekezo esilandelayo
ISonos yethula i-Sonos Radio ekhethekile futhi yamahhala kumakhasimende ayo